Gazety seraseran'ny TANDAVANALA
Mba hanomezana fahafaham-po antsika mpamaky dia nohezahina nampidirina ao amin'ny tranok'alan'ny CMP Tandavanala ny gazety antsoina hoe : " Seraseran'ny Tandavanala ", izay mivoaka isan-telo volana ary voasoratra amin'ny teny malagasy.
Ato amin'ity sampana iray ity dia ahitanao ireo vaovao maro momba ny tandavan'ala (corridor forestier) sy ny tontolo manodidina azy : ny fikajiana sy ny fintantanana maharitra azy.
Ireo lahatsoratra avoitra ato amin'ny gazety " Seraseran'ny Tandavanala " dia mahakasika ny: vaovaon'ny Tandavanalan'i Fianarantsoa, ny kolon-tsaina sy fanabeazana, ny serasera sy fanabeazana, ahitana toro hevitra mahasoa sy alavoly ihany koa.
Nanomboka tamin'ny taona 2009 no nivoaka ny gazety " Seraseran'ny Tandavanala " ka niaraha-nanatontosa tamin'ireo mponina eny ifotony sy ireo vondrona mpiara-miasa amin'ny CMP Tandavanala tamin'ny alalan'ny fifampizaram-baovao. Araka izany dia ahitana lahatsoratra nosoratan'ireo mpamaky ihany koa ato amin'ity gazety " Seraseran'ny Tandavanala ity ".
Koa dia manasa anao izahy hahita fahafinaretana sy hahazo fahalalana eo am-pamakiana izany !
� Izay liam-baovao, liam-pivoarana! �.
Seraseran'ny Tandavanala laharana 14 (version pdf)
Seraseran'ny Tandavanala laharana 13 (version pdf)
Seraseran'ny Tandavanala laharana 12 (version pdf)
Seraseran'ny Tandavanala laharana 11 (version pdf)
Seraseran'ny Tandavanala laharana 10 (version pdf)
Total : 88546